Hilalalala sa tsy hilalalala hoan’ny filoha Obama? Mifanontany ny Kenyana · Global Voices teny Malagasy
Hilalalala sa tsy hilalalala hoan'ny filoha Obama? Mifanontany ny Kenyana
Voadika ny 06 Aogositra 2015 3:46 GMT
Julie Gichuru, Kenyana mpanentana sy mpanolotra fandaharana amin'ny Fahitalavitra. Sary Creative Commons avy amin'ny World Trade Organisation (Fikambanana Iraisampirenena momba ny Varotra).
Niarahaba ny filoha Amerikana Barack Obama tonga soa tamin'ny Zaikaben'ny Fandraisan-Draharaha an-tanana Manerantany tamin'ny fihetsika miavaka i i Julie Gichuru: Nilalalalam-pifaliana izy raha nandray azy nandritra ny fitsidihany ofisialy tao Kenya.
Mahazatra ao Afrika ny milalalala (kiririokam-behivavy amin'ny lelany fahitantsika amin'ny Sakalava vavy rehefa miantsa) rehefa miarahaba am-pifaliana, misaona na manao izay itodihana. Mampiseho an'i Gichuru mihiaka ity lahatsary Youtube eto ambany nalefan'ny fandaharana Citizen TV ity:
Nandrehitra adihevitra antserasera raha antonona ilay fotoana ny lalalala nataony na tsia. Manohana mafy azy ny sasany raha tsy izany kosa ny hafa.
Taorian'ny fandefasana ny vaovaon'ny lalalalany tao amin'ny habaka Kenya Today, niditra aterineto ny mpamaky mba haneho ny fijeriny.
Nankafizin’ i Eve ilay fihetsika :
Vehivavy Afrikanina izy.
Tiako koa ilay izy.
Mpamaky iray tsy nitonona anarana nanontany hoe:
Inona no maharatsy ny milalalala? Mino fa fomba tokana handraisana olobe izany..hafa noho ny fomba mahazatra fahita… indraindray mba tsara koa ny mankasitraka fa Afrikana isika ary ao anatintsika izany! Atsaharo ny fankahalana!
James Mathu nanamarika hoe:
Tiako ilay izy. Fihetsika Afrikanina izany ary tsy mino aho fa raisin'ny filoha Obama ho fanevatevana ilay izy. Sahiko ny miloka fa hitady ny niaviany sy ny dikany izy.
Wakisome nieritreritra fa ao anatin'ny kolontsaina afrikana ny zavatra nataony :
Miankina amin'ny zoro ijerenao azy ihany io. Ny zavanisy ny fomba afrikana hankasitrahana ny mpanjaka, ny maherifo teny amin'ny lampihazo dia tamin'ny alalan'ny lalalala. Afrikana madiorano izany ary tsaroako izy nilaza azy io ho fomba afrikana. Milaza aho hoe inona no tsy nety tamin'ilay izy? Mieritreritra aho fa nety ny nataony.
Mimi niteny fa voasasan'ny imperialista atidoha izay mitaraina amin'ilay izy :
Ireo mimenomenona amin'ny fandraisam-bahiny nataon'i Guchurus no porofo mivantana amin'ny fanasana atidoha ny Afrikana mainty nataon'ny kolontsaina imperialista tandrefana hanoherana ireo fomba firesaka sy fomba fifandraisana fanaony. Asandrato hatrany ry Gichuru a!
Ilay lalalala no nahatonga an'i Onyango ho afa-mirehareha amin'ny vakoka Kenyana sy Afrikana ao aminy:
Tiako ny fomba nanaovan'i Julie azy, mampalahelo fa misy ny sasany amitsika tsy mahay mnkasitraka ny tenany ka mamindra ny fankahalany ny tenany amin'ny olona hafa, izay no maha-julie azy ary avelao izy haneho ny maha-julie azy fa tsy afaka ny ho olon-kafa izy. Mahatonga ahy hirehareha amin'ny maha-Kenyana sy Afrikana ahy ny nataony ary ankasitrahako ny fahasamihafantsika.
Ary lasa lavidavitra kokoa i Mimi tamin'ny fanoloran-kevitra fa tokony atao ofisialy io fomba io :
Manome zavatra ho antsika hatrany i Julie! Fa maninona moa raha mba ampidirina ho fomba fandraisam-bahiny kenyana amin'ny fomba ofisialy izy io!
Raha miresaka momba ireo mitsikera an'i Gichuru dia nampitandrina i Justus Atuti :
Nieritreritra aho fa nataon'i Gichuru tsara tokoa ilay izy ary tena Afrikana tokoa, mitaratra ny hoe iza isika amin'ny maha-vahoaka iray antsika. Amin'izao ambaratongam-pankahalana izao, dia tsara amin'i Kenya ny maty. Taona mampididoza ho antsika rehetra ny 2017.
Saingy, mpamaky iray no nanandratra fa manimba fahasalamana ny milalalala amin'ny micro :
Fa maninona isika no tsy maintsy miafina ambadiky ny kolontsaina sy ny foko rehefa te-hiala fanitsiana? Ka inona no andehanantsika any an-tsekoly? Manana ny fomba fanaovan-javatra ny mpanao gazety sy ny fomba hamonosany azy, manimba fahasalamana ny miady amin'ny fanamafisam-peo amin'ny fanaovana lalalala, mba handrenesan'ny sofinao azy tsara. Milalalala im-betsaka ny Afrikana saingy tamin'ity indray mitoraka ity ry ranabaviko Julie, tahaka ny tsy dia nety loatra ka amin'ny manaraka miezaha ary ovay ilay izy. Andao ovaina io toe-po ara-politika io fa io no nahatonga an'i Auma hanjaka amin'ny toerana fantatra fa kianjanao ary ny zavanisy dia nandresy izy. Mirary soa anao ho tsara kokoa ranabavy Julie.
Utamaduni nieritreritra fa tsy matihanina ilay izy:
Vita ny mpanao gazety mametraka eo anilany ny mahamatihanina azy hiforetana amin'ny sitrapon'ny mpanao gazety sy ny fandadizany amin'ity firenena ity.